“Anigaa is qarribay”. – Gool FM
“Anigaa is qarribay”.
Kaafi October 23, 2017
(Rome) 23 Oct 2017. Laacibkii hore ee Italy Antonio Cassano waxa uu sheegay haddii uusan IS QARRIBIHIN in uu ahaan lahaa sida Lionel Messi iyo Neymar.
Cassano waxa uu waayihiisa soo kala matalay Real Madrid, AC Milan, Inter iyo Roma, isaga oo ku guuleystay La Liga iyo Serie A halka uu 39 jeer u saftay Italy.
Hase ahaatee, 35 jirka – laba jeer dib uga dama yimi go’aankii uu ugu saxiixay Verona xagaagii tagay ayaa ku adkeysanaya in uusan wali ka fariisan ciyaaraha oo uu dareeayo in uusan ka miraha dhalin tayadiisii sababo la xiriira qaabkii uu u wajahay Kubadda Cagta.
“Waxaan ahay shaqsi dhib baddan, mana aqoon jawiga aan la soo toosayo,” ayuu Cassano u sheegay Rai Sport.
“Heerkeyga ciyaareed mid duni kale ah ayuu ahaan karay, balse ma jecleyn tababbarka waxaana u cuni jiray sida aan ka helo waana is qarribay…..
“Waxaan u ciyaaray kooxaha dunida ugu wanaagsan sida Real Madrid, Inter Milan, Roma iyo Milan. Haddii garbahayga aan madax kale ku wadan lahaa, waxaan ku ciyaari lahaa mareegaha Mars. Waxaan ahaan lahaa sida Lionel Messi iyo dhawr kale.”
City ma iyada oo aan dhineceeda dhulka la dhigin ayey ololahan horyaalka qaadi doontaa?
Baloteli oo kala xushay midda uu ku biiri lahaa Barca iyo Real